Izindaba - Ukuhlaziywa kwenkambiso yentuthuko yesikhathi esizayo yomkhakha wezinto zokubhala waseChina
1. Sibutsetelo sentuthuko yomkhakha wokubhala
Izinto zokubhala zingamathuluzi ahlukahlukene abantu abawasebenzisayo emisebenzini yamasiko njengokufunda, ihhovisi nempilo yasekhaya. Ngokuthuthuka okuqhubekayo komnotho nobuchwepheshe, isigaba sezinto zokubhala sibuye sibuyekezwe njalo futhi sithuthukiswe. Izinto zokubhala zanamuhla zingahlukaniswa cishe zibe ngamathuluzi okubhala, okubhalela abafundi, Kunemikhakha eminingi engaphansi efana nezinto zokubhala zasehhovisi, izinsiza-kufundisa, izinto zokubhala nezimpahla zezemidlalo.
Amapensela angaphansi kwemboni yokuhlukaniswa kwezinto zokubhala, futhi ahlala njalo enesikhundla esibalulekile ekubhaleni kwamahhovisi. Amaqembu ayo abathengi ikakhulukazi abafundi. Ifektri yokukhiqiza amapensela yaseChina yazalwa ngawo-1930. Ngo-1932, eKowloon, eHong Kong, amaShayina atshala imali futhi aguqula ifektri yepensela eyayiphethwe usomabhizinisi waseBrithani wayenza yaba ifektri edumile yamapensela. Ngo-1933, iBeijing China Pencil Company neShanghai Huawen Pencil Factory zavela zilandelana. UWu Gengmei, owabuya eJapan ngo-1935, wasungula ifektri eyaziwayo yokwenziwa kwamapensela e-Shanghai ekwazi ukuzenzela ama-cores womthofu, amabhodi amapensela, abafaka amapeni nokucubungula ukubukeka yedwa. IHarbin China Standard Pencil Company, okuyinkampani ehlangene yomphakathi nezizimele, yasungulwa ngoSepthemba 1949. Le nkampani isengenye yezinkampani ezinkulu embonini kazwelonke yamapensela.
Amapensela wendabuko asebenzisa ukhuni njengomgqomo ne-graphite njengomgogodla wokuhola, odinga inani elikhulu lezinkuni okufanele zisetshenziswe. Inani elikhulu lokugawulwa kwezinkuni lephula umqondo wokuvikelwa kwemvelo. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zentuthuko yezimakethe, ngo-1969, iTeijin Company yathuthukisa indlela yokwenza amapensela epulasitiki. Ehlobo lika-1973, iBerol Company yase-United States kanye ne-Sailorpen Company yaseJapan bathenga le nqubo cishe ngasikhathi sinye. I-Sailorpen yaqala ukukhiqiza ngobuningi amapensela epulasitiki ngo-Ephreli 1977. Ngaleso sikhathi, umnyombo wokuhola wamapensela epulasitiki wawenziwe ngenhlanganisela ye-graphite ne-resin ye-ABS, kanti ingaphambili lomthofu laligcwele upende we-resin. Kusetshenziswe ama-extruder amathathu ukuxuba izinto ezintathu zokwenza ipensela, okwenze lula inqubo yokukhiqiza ipensela. Uma kuqhathaniswa namapensela esiko okhuni, amapensela epulasitiki akhiqizwa nguSailorpen abushelelezi ukusetshenziswa, futhi ngeke angcolise iphepha nezandla. Intengo ifana naleyo yamapensela ajwayelekile. Amapensela epulasitiki asethandwa. Ngo-1993, umenzi wezinto zokubhala waseJalimane wenza umugqa wokukhiqiza oqhubekayo wamapensela epulasitiki, ongakhiqiza amapensela angaba ngu-7 000 ngehora elilodwa. Amapensela anobubanzi obungu-7.5 mm nobude obungu-169 mm. Leli pensela lepulasitiki lidinga izindleko eziphansi zokukhiqiza kunamapensela enziwe ngokhuni, futhi lingenziwa ngezimo ezahlukahlukene, ezinjengokuqoshwa, amazombe, okumise okwenhliziyo, njll.
Ngemuva kwentuthuko yesikhathi eside nokuqongelela, imboni yokubhala eseYurophu, eMelika, eJapan nakwamanye amazwe ithathe isikhundla esiphezulu embonini yokubhala yomhlaba. Kodwa-ke, ngenxa yezici ezinjengezindleko zabasebenzi nokuvikelwa kwemvelo, izixhumanisi zokukhiqiza izinto ezisezingeni eliphansi ziye zashintsha kancane kancane zaya eChina, India naseNdiya. IVietnam namanye amazwe aseningizimu-mpumalanga ye-Asia aqhubekela phambili kancane kancane ezigabeni zokusebenza komkhiqizo, ukwakhiwa komkhiqizo, nocwaningo lwezinto ezibonakalayo nentuthuko.
2. Umkhuba wentuthuko wemboni yokubhala
1) Ukusetshenziswa kwezinto zokubhala kuvame ukubekwa uphawu futhi kwenziwe kube ngokwakho
Amathuluzi wokubhala amapeni asetshenziswa kakhulu esifundweni nasemsebenzini wansuku zonke. Ngokuthuthuka kwezinga lemali engenayo labahlali kanye nokwenza ngcono imiqondo yokusebenzisa, abathengi bathambekele kakhulu ekuthengweni kwemikhiqizo ngokusebenza okuhle kakhulu ngokuya ngekhwalithi yomkhiqizo, izinga lokuklama, isithombe esibulalayo, nedumela lomsebenzisi. Imikhiqizo enophawu. Umkhiqizo ukwenziwa kwekhwalithi, izici, ukusebenza, kanye namazinga okusetshenziswa kwemikhiqizo yenkampani. Iqukethe isitayela senkampani, umoya nedumela layo, futhi izothinta kabanzi ukuthenga kwabathengi.
2) Izindawo zokuthengisa zezinto zokubhala zivame ukuboshwa
Ngokuqiniswa komkhuba wokufaka uphawu lokubekisa ukusetshenziswa kwezinto zokubhala, izinkampani zokubhala brand ziyaqhubeka nokukhuthaza indlela yokusebenza kwamaketanga, futhi izitolo ezijwayelekile zokubhala nazo zikhombisa umkhuba wokubamba iqhaza elibonakalayo ekuthengiseni imali. Izitolo ezijwayelekile zokubhala zazivame ukuba yisiteshi esijwayelekile sokuthengiswa kwezinto zokubhala, kepha ngenxa yemigoqo yokungena ephansi kanye nomncintiswano wamanani ashubile, izitolo eziningi ezijwayelekile zokubhala zinenzuzo ebuthakathaka, imisebenzi engazinzile futhi zize ziyisuse ngenxa yokuphathwa kabi kanye nemali enganele. Ukusebenza kwe-Franchising brand stationery chain kulungele ukwenza ngcono isithombe sesitolo, kuthuthukise ukubekwa kwekhwalithi yemikhiqizo ethengisiwe, futhi kuthuthukise ikhono lokumelana nobungozi ngezinga elithile. Ngakho-ke, eminyakeni yamuva nje, ukuthambekela kwamatheminali okuthengisa izinto zokubhala kube yinto ephawulekayo.
I-3) Ukusetshenziswa kwezinto zokubhala kunaka ukuzenzela kanye nezinga eliphezulu
Njengamanje, abafundi kanye nabasebenzi abasebancane basehhovisi bakhetha izinto zokubhala ezinobuciko, ezenziwe zaba ngezakho, nezemfashini. Izinto zokubhala ezinjalo zivame ukuba nomklamo oyingqayizivele wokudala, inoveli nokubukeka kwemfashini, nemibala egqamile, engahlangabezana nezidingo zomsebenzi eziyisisekelo futhi ithuthukise kakhulu ulwazi lomthengi. Ngasikhathi sinye, emkhakheni wehluzo, ezezimali, ukuklanywa nezipho, amaqembu abathengi abathengi abaphezulu asebenzayo ayanda, futhi izincwadi zokubhala ezisezingeni eliphakeme ezinobuchwepheshe obuqinile, ikhwalithi ephezulu kanye nenani eliphakeme kuye kwaba yindawo entsha ekhanyayo kancane kancane yokukhuthaza ukusetshenziswa kokubhala. Ukuhlaziywa kwemikhakha efanelekile, sicela ubheke embikweni wokuhlaziya imakethe yezimboni yokubhala okhishwe yiChina Report Hall.
Isikhathi Iposi: Oct-22-2020